Dhamma Beri Sayadaw U Wiriya – Which School Maung Ye Ge ? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Tin Moe – The Bronze Statue Hidden under the wild grass
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (14th July 2011) →
Dhamma Beri Sayadaw U Wiriya – Which School Maung Ye Ge ?
‘ဘယ်ကျောင်းနေမလဲ မောင်ရေခဲ’ – ၁
အင်း … သူတို့လို လူတွေ ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့်ကြလို့လဲ ကမ္ဘာကြီး ပြားသွားသလားတော့ မပြော တတ်ပါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ သိသာလာတာ တစ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာပြန့် သွားကြ တဲ့ မြန်မာတို့နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ ဦးထိပ်ထက်မှာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ အငွေ့အသက် ကလေးတွေပါ ပါသွားကြတဲ့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်လဲ သူတို့ သွားရာ ကမ္ဘာအနှံ့ဆီ အတော်လေးပြန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့စကားကြောက ပြောရင်းပြောရင်း အကြောရှည်ပြီး ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာတောင် မသိတော့သလို လုံးခြာလိုက်နေတာကို အကဲခပ်မိတဲ့အတွက် မိမိကပဲ ကြားဖြတ်ပြီး
“ကဲ-ဒကာကြီး၊ အချိန်ကလေးရတုန်း ဒကာကြီးရဲ့ ညည်းချင်းရှည်ကြီးကို လက်စသတ်ပြီး အဓိက မေးလို တာကိုသာ လိုရင်း တိုရှင်းပြောပြပါ”
လို့ ဆိုတော့မှ ဒကာကြီးက
“အို .. ဆောရီးပါဘုရား၊ အဲ ကန်တော့ပါဘုရား၊ အခု တပည့်တော် ရဲ့သားနဲ့ သမီးက ကျောင်းမှာ ဘာသာချင်းမတူတဲ့ ဆရာဆရာမတွေ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ စပ်မိစပ်ရာ ပြောကြရင်း ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရား ချင်း နိူင်း ယှဉ် ပြောကြတဲ့အခါမှာ တခြားဘာသာဝင်များက “သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားသခင်ဆိုတာ အခုထိ ကောင်းကင်ဘုံနန်းမှာ ရှိနေတယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ဘုရားသခင်က ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူတိုင်းကို ရှိသမျှအပြစ်တွေလဲ ဆေးကြောဖယ်ရှားပေးမယ်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကင်းဝေးစေမယ်၊ ချမ်းသာ သုခတွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင်လဲ အစစတာဝန်ယူတယ် “ ဆိုတဲ့ အာမခံချက်အပြည့်ရှိကြောင်းတွေကို သူတို့ဘက်က ရွှန်းရွှန်းဝေ အောင် ပြောပြကြပါသတဲ့။
မိမိရှင်းပြခဲ့တာကတော့ – ဒကာကြီးရဲ့မေးခွန်းရှည်ကြီးထဲမှာ ပထမဆုံးက “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မရှိတဲ့ ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေကြတာလား” ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ မရှိတော့တဲ့ဘုရားကို ကိုးကွယ်နေကြသူတွေ မဟုတ်ဘူး၊ ထင်ရှားရှိတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ကိုယ်စား တရားတော်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံး ပူဇော် နေကြသူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထူးသိမှတ်သင့်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးသတိပေးလိုတာကတော့
“ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကိုးကွယ်ပသရေး ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး၊ လိုက်နာကျင့်သုံး ပူဇော်ရေး ဘာသာတရားသာ ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို အလေးအနက် နားလည်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းရှင် မေးတဲ့အထဲမှာ မပါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချင်တာ တစ်ခုလဲရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့
“ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အခုဘယ်မှာ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ အတူရှိနေပါသလဲ” ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က ဘုရားရှင်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ရုပ်အဆင်းတော်တင့်တယ် သပ္ပါယ်မှုကိုသာ ကြည်ညိုတတ်တဲ့ “ဝက္ကလိ” ဆိုတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးရှိပါတယ်။ ဒီရဟန်းက ဘုရားရှင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးကြည်ညိုကိုးကွယ်နေချင်တယ်၊ အဆုံးအမအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးပူဇော်မှုမျိုးတော့ မလုပ်လိုပါဘူး။ အဲဒီရဟန်းကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က –
ဒါတွေကတော့ “အမေးရှိရင် အဖြေရှိရမယ်” ဆိုတဲ့အတိုင်းသာ ဖြေလိုက်တာပါ။ အမှန်ကတော့ “ ဘုရားရှင် အခုဘယ်မှာလဲ” ဆိုတဲ့ ပြဿနာဟာ မေးဖို့လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ် ပါဘူး။
“ စစ်မှန်တဲ့ ကိုးကွယ်အားထားရာ” ဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော် အရပြောရမယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကသာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
(သည်ဆောင်းပါးကို မေတ္တာဥယျာဉ်ဝက်ဆိုက်က ယူပါတယ်။ သူ့အမှာစကားလေးက သည်လိုပါ … မှတ်ချက်။ ။ မေတ္တာဥယျာဉ်ဆိုဒ်မှ ကောင်းနိုးရာရာများ ရှာဖွေစုဆောင်း တင်ပြထားတဲ့ ဓမ္မစာစုများထဲက မိမိတို့နှစ်သစ်တဲ့ စာစုများကို မည်သူမဆို ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဓမ္မဒါနပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မေတ္တာဥယျာဉ်ဆိုဒ်မှ ကူးယူ ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ဟု ဆိုတဲ့ စေတနာအသိအမှတ်ပြု စာလေးတော့ ရေးစေချင်ပါသည်။ )
Posted by oothandar on July 20, 2011 in Ashin Wiriya, Overseas Burmese